बाँकेमा एकैदिन ४७ जनामा कोरोना संक्रमण | हिमालयन ट्रिबुन
२०७७ जेष्ठ ५, सोमबार ११:१४
बाँकेमा एकैदिन ४७ जनामा कोरोना संक्रमण
HT २०७७ जेष्ठ ५, सोमबार ११:१४
काठमाडौं । नेपालमा थप ५३ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोमबार बाँकेमा ४७ जनासहित देशका विभिन्न भागमा कोरोनाभाइरसका ५३ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामामा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट बाँकेमा ४६ पुरुष र एक महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए ।
यस्तै, धुलिखेल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणबाट चार जनामा संक्रमण देखिएको छ । उनीहरु धनुषा, रौतहट, दाङ र धादिङका पुरुष रहेको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताए । विराटनगरमा गरिएको परीक्षणबाट मोरङमा एक पुरुष र भैरहवाको प्रयोगशालामा गुल्मीका ४१ वर्षीय एक पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
सोमबार संक्रमित पुष्टि हुनेहरु १८ देखि ४६ वर्षसम्मका पुरुष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए । हालसम्मका कुल ३ सय ५७ जना संक्रमितमध्ये २ सय ९८ पुरुष छन् भने ५९ जना महिला छन् । यसअघि सोमबारै बिहान रौतहटमा सात पुरुष र एक महिला तथा र बारामा एक पुरुष गरी नौ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । संक्रमितमध्ये हालसम्म ३६ जना निको भएका छन् भने दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
बेलकाः जनताको घर–दैलोमा लोकतन्त्र
Spread the love उदयपुर पूर्वी भेगको बेलका नगरपालिकाले साढे दुई वर्षको कार्यकालमा कोरोना रोकथाम, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरेका स–साना काम स्थानीय जनप्रतिनिधिले घर–दैलोमा जनतालाई कसरी सेवा पु¥याउन सक्छन् भन्ने उदाहरण भएका छन् । गोपाल दाहाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले कोभिड–१९ को संक्रमणका वेला नगरभित्र छिरेका १४८ जनालाई नगरका चार […]
२०७७ असार १०, बुधबार १०:४३
थप ६२९ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १०,७२८ पुग्यो
२०७८ बैशाख २१, मंगलवार १२:१०
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा थप ६ जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
२०७७ चैत्र १०, मंगलवार १६:३९
थप १८८ जनामा कोरोना संक्रमण, ७७ जना संक्रणमुक्त
२०७७ जेष्ठ ३, शनिबार १५:५२
चीनबाट खरिद गरिएको पहिलो चरणको स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुग्यो
२०७७ आश्विन २०, मंगलवार १०:४८
थप १५५१ जनामा कोरोना संक्रमण, ९ जनाको मृत्यु, २३४० जना डिस्चार्ज